Waxgaradka Puntland oo ku guulaystay siidaynta markab laga leeyahay Somaliland – SBC
Waxgaradka Puntland oo ku guulaystay siidaynta markab laga leeyahay Somaliland
Waxgarad Ganacsato aqoonyahano iyo xukuumada Puntland ayaa si wayn ugu guulaystay siidaynta markab ganacsi oo laga leeyahay somailand kaasi oo mudo gacanta uugu jiray kooxo burcad badeed ah , waxana markankii iyo shaqaalihii saarnaa ay galabta ka ambabaxeen xeebta puntland iyagoo ku sii jeeda dekeda Berbera ee Somaliland .
Shirjara’id oo lagu qabtay xarunta rugta ganacsiga ee Bosaso ayaa lagu faahfaahiyay sii daynta markabkan waxana shirkan ka soo qayb galay ganacsato ka socota sonaliland kuwaas oo mudooyinkii dambe ku sugnaa Bosaso .
Ugu horeyn waxaa shirkan ka hadlay Maxu’d Ceydiid Jaamac oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Puntland waxana uu cadeeyay in maanta oo ku beegan 28ka july si toos ah loo siidaayay markabkii NT juba 20 kaasi oo shidaal u siday somaliland mudana gacanta ugu jiray kooxo burcad badeed ah .
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ganacsato ka socota xukuumada somaliland kuwaas oo mudo bosaso u joogay ka qayb galka sii daynta markabka ay burcad badeedu haysteen, C/wali Maxe’d Faarax oo ah ganacsade ka socda somaliland ayaa sheegay in uu si wayn ugu mahad celinayo xukuumada Puntland iyo cidii kale ee waxgarad ahayd ee ka qayb gashay siidaynta markanka waxana uu sheegay in uu abaal wayn u hayo Puntland.
Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo isna ka hadlay sii daynta markabka ayaa sheehay in dadaal dheer oo la sameeyay lagu guulaystay siidaynta markabkan iyo shaqaalihii saarnaa, waxana uu carabka ku adkeeyay in markabkan oo la haystay mudo kooban si wayn loogu guulaystay sii dayntiisa .
Cali Cabdi Awaare ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax lacag madaxfurasha ah oo laga bixiyay markabkan iyo sidii loo siidayn lahaa laakiin waxa uu sheegay in lagu siidaayay is afgarad iyo wada hadal lala sameeyay burcad badeedii .
Siidaynta markabkan ayaa waxaa ka qayb qaatay Ganacsato , Culama’udiin waxgaradka reer puntland ah kuwaas oo u istaagay sidii ay u sii dayn lahaayeen markankaasi iyo shaqaalihii saarnaa .
Markabka NT Juba 20 ayaa 14kii bishan waxaa af duubtay kooxo burcad badeed ah waxaana maanta lagu guulaystay siidaynbtiisa waxana uu galabt ka ambabaxay xeebaha puntland isagoo ku sii jeeda xeebta berbera ee Somaliland .
A/risak Arab says:
Puntland way ku mahadsantahay dadaalkan sido kale sbc na way mahadsantahay